I-Custom Precision CNC Turning Lathe Service-OEM / ODM China CNC Turning Parts Umkhiqizi
Ouzhan kuyinto ngokunemba professional & abanolwazi Izinsizakalo zokuguqula i-CNC umphakeli, umkhiqizi, umhwebi kanye nokuthumela kwelinye izwe e-China, ubelokhu ekhethekile ekuhlinzekeni ngochwepheshe Izinsizakalo zokuguqula i-OEM / ODM CNC ngekhwalithi ephezulu kepha eshibhile Izingxenye zokuguqula ze-CNC, CNC lathe izingxenyenoma izingxenye eziphezulu ezenziwe ngobuciko ezinemishini esezingeni eliphakeme nokusebenza ezinamakhono. Njengengxenye yomkhono, izingxenye zepuleti, izingxenye ze-shaft, ama-washers, ama-bolts, ukufakwa kwepayipi, njll.
Kuthuthukile kwethu CNC Ukuvulaizikhungo kanye nezinsizakalo zenkambiso zisekela izinto ezahlukahlukene, kufaka phakathi ithusi, insimbi engagqwali, i-carbon steel, i-aluminium, i-titanium namapulasitiki. Sizohlala sihlela inqubo yokuguqula ngokunemba efanelekile, ngesisekelo sokuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho, singanciphisa izindleko zakho ngezinga elikhulu kakhulu. Isiko lethuIzinsizakalo ze-CNC machining njalo uqinisekise ukuthi amakhasimende ethu athola ikhwalithi ephezulu kakhulu CNC waphenduka izingxenye nezinsizakalo ezicatshangelwa kakhulu.
Amandla Nezici Zokuguqula ze-Ouzhan Precision CNC:
OuZhan unekhono ukuhlinzeka engabizi CNC amasevisi lathe futhi ngokunemba high imikhiqizo esezingeni inani elikhulu amaphrojekthi.
- Sekela ukukhiqizwa kwamaqoqo amabhethri aphansi, aphakathi nendawo kuya phezulu
- Rapid prototyping futhi ekupheleni-ukusetshenziswa yokukhiqiza
- Ukunemba okuphezulu, ukukhiqiza isivinini esikhulu nokwethembeka okuphezulu
- Uhla olubanzi lwezinto zensimbi nezamaplastiki
- Ukukhiqiza okuqinile nesikhathi sokulethwa okusheshayo
- Ukuphela okudingekayo nokubekezelelana okuqinile kuyatholakala
Kungani Khetha Ouzhan CNC Turning Services
Imishini yethu yokukhiqiza esemqoka ingenisiwe isuka eSwitzerland naseJapan, enganikeza amakhasimende ngamanani entengo ashibhile e-CNC.
2. Multiple CNC yokukhiqiza amakhono
Ngaphezu kokuphenduka, sisebenza ngokukhethekile ekugayeni, ekuthangeni, ekubhoneni, ekuguquleni nasekulingiseni izinsizakalo, ngakho-ke ungathola ukukhethwa okukhulu kwezingxenye zomshini ze-CNC eqenjini lethu esithembekile.
3. Amandla we-R & D aqinile
Sinabanjiniyela abayi-10 esikhungweni sethu se-R & D, bonke bangodokotela noma oprofesa base-University of Science and Technology of China. Singanikela ngobuchwepheshe be-CNC bokuklanywa nezinsizakalo zobunjiniyela ze-CNC.
4.Ukulawulwa Kwekhwalithi Okuqinile (ISO 9001: 2008)
Sinezisebenzi zokuhlola ikhwalithi yobuchwepheshe nezinsizakusebenza, ngokuya ngamazinga wamazwe omhlaba kwimikhiqizo yakho ukuze uvivinye, bese ukhipha umbiko wokuhlola oningiliziwe wezingxenye zamakhasimende ze-CNC.
5. I-OEM ne-ODM iyamukeleka
Osayizi ngezifiso kanye bobunjwa ayatholakala. Uyemukelwa ukwabelana ngemidwebo yakho ye-2D noma ye-3D yezingxenye zakho zemishini ye-CNC nathi, ake sisebenzisane ukwenza impilo ibe nobuciko ngokwengeziwe.
Uhlu lwemishini ye-Ouzhan CNC
Izinsiza kusebenza Uhlobo
5-eksisi milling isikhungo
Isikhungo sokugaya se-4-axis
3-eksisi milling isikhungo
Ingxenye #: AMS-MCV-450-BT40
Ukhiye broaching umshini
Laser wokugubha isikhungo
Iyini i-CNC Turning Service nokuthi Isebenza kanjani i-CNC Turning
CNC turningikhiqiza izingxenye ezinezici ze-cylindrical ngokususa okokusebenza kusuka kuzinsimbi noma izinduku zepulasitiki kusetshenziswa ama-cutters, ama-drill enkaba noma i-tooling bukhoma. I-CNC Turning isebenzisa imishini elawulwa yikhompyutha ukudala umkhiqizo ohlukile wokugcina. Le nqubo isebenzisa ithuluzi lokusika eliyiphuzu elilodwa elifaka ngokufana nezinto zokusika. Okokusebenza kuzungeziswa ngesivinini esishintshayo futhi ukusika kwethuluzi kuyanqamula ukudala ukusikeka kwe-cylindrical ngezilinganiso eziqondile. Isetshenziselwa ukudala okuyindilinga noma ama-tubularshares kusuka ezingcezwini ezinkulu zezinto ezibonakalayo. Kuyinqubo ezenzakalelayo futhi izivinini zingaba ukulungiswa kokunemba okukhulu kunokujika i-lathe ngesandla.
Uma kukhulunywa ngenqubo yokuphenduka ye-CNC, indlela yokukhiqiza esusayo yenziwa ngokujwayelekile ku-CNC lathe noma isikhungo sokujika. Ngaphambi kokusika, i-G-code nomshini wokuguqula kudingeka ulungiswe, bese uvikela ibha engenalutho yesitoko sezinto ku-chuck othini lokuphotha, i-chuck ibamba isiqeshana lapho i-spindle ijikeleza. Nge-spindle spins ngejubane elithile, i-station-single point-point cut cut cutter izohamba ngendlela eqondile ehambisana ne-axis yokujikeleza futhi isuse okweqile, ukunciphisa ubukhulu be-block, ucacise ubukhulu bese udala ukuphela okuhle, uthole okokugcina ngokwezifiso i-CNC iphenduke izingxenye ngemininingwane oyifunayo.
Izinto Zokuguqula i-CNC - Izinto ezisetshenziselwa i-CNC Lathes
Insimbi emaphakathi, Ingxubevange nethuluzi
Insimbi emnene 1018
Insimbi emnene 1045
I-Polypropylene (PP) 30% GF
Insimbi emnene A36
Inayiloni 30% GF
Ingxubevange yensimbi 4140
Titanium Ibanga 1
Ingxubevange yensimbi 4340
I-Titanium Ibanga lesi-2
Ithuluzi lensimbi O1
Ithuluzi lensimbi A2
Ithuluzi lensimbi A3
I-Magnesium AZ31B Magnesium AZ31B
Ithuluzi lensimbi D2
Ithuluzi lensimbi S7
Ithuluzi lensimbi H13
Izicelo ze-CNC Turning Services nezingxenye
Valve & ipayipi
I-Ouzhan CNC Milling Surface Iqedile
Nayi inketho ebanzi yensimbi yokuqedela izinsiza ngokuzikhethela kwakho izingxenye zomshini we-CNC wokuguqula ukuthuthukisa ukubukeka kwezingxenye, ukubusheleleka kwendawo, ukumelana nokugqwala, nezinye izici:
① Njengomshini (ojwayelekile): ~ 125 RA µin (3.2 RA µm). Amamaki amathuluzi amancane azobonakala engxenyeni.
② Smoothed: Izingxenye zenziwe ngomshini ngezinga eliphansi lokuphakelayo ukuze kuzuzwe ubunzima bendawo eyi- ~ 62.5 RA µin (1.6 RA µm). Ubukhali be-Surface bungehliselwa ku- ~ 32 RA µin (0.8RAµm) uma uceliwe.
Bl Ubuhlalu Obuqhumile: Ubuhlalu be-Bead bengeza umugqa ofanayo we-matte noma we-satin engxenyeni eyenziwe ngomshini, kususwe wonke amamaki wamathuluzi. Isetshenziselwa izinhloso zobuhle.
Clear Okucacile noma Umbala we-Anodized: I-Anodizing ingeza ukumboza okuncane, okunzima, okungahambisani nobuso ebusweni bezingxenye ze-aluminium, okwandisa ukugqwala nokuqina kokugqoka. Kutholakala ngemibala ehlukahlukene.
Hard I-Hardcoat e-Anodized: I-Hardcoat anodizing ikhiqiza ukumboza okunamandla kwe-ceramic okunikeza ukugqwala okuhle nokugqoka ukumelana. yezinhlelo zokusebenza ezisebenzayo.
Co Ovalwe Ngophawuda: Ukumbozwa ngophawuda kunezela ungqimba omncane wopende we-polymer ovikelekile oqinile, ukugqwala nokugqwala ebusweni bengxenye ethile. Kutholakala ebangeni elikhulu lemibala.
⑦ I-Electropolished: I-Electropolishing inqubo ye-electrochemical esetshenziselwa ukupholisha, ukufakela izinsimbi kanye nokuncibilikisa izingxenye zensimbi. Kuyasiza ukunciphisa ubuso bendawo ebusweni.
⑧ I-oxide emnyama: I-oxide emnyama ingubo yokuguqula esetshenziselwa ukuthuthukisa ukumelana nokugqwala nokunciphisa ukukhanya okukhanyayo.
Coating Ingubo yokuguqula i-Chromate (i-Alodine / Chemfilm): Ingubo yokuguqula i-Chromate isetshenziselwa ukukhulisa ukumelana nokugqwala kwama-alloys ensimbi ngenkathi kugcinwa izakhiwo zazo ezihamba phambili.
Ush Ukuxubha: Ukuxubha kukhiqizwa ngokupholisha insimbi ngomgogodla okuholela ekugcineni kwe-satin.